Iifowuni ze-Android | Iimpawu ze-Android | I-Androidsis
Yenza ngokwezifiso i-Android yakho ngeyona nto intle Iifowuni zamaphephadonga kunye neemifanekiso ze-Android. Iiphephadonga zezinye zezinto ezizezakho ze-Android yakho kwaye zisebenza ukubonisa izinto ozithandayo, izinto ozithandayo okanye ubonise ngokuthe ngqo ifoto yabantu obathandayo. Ukuba into oyikhangelayo kwiphepha lodonga le-Android lihle kangangoko kunokwenzeka, apha sikubonisa uninzi oluhlelwe ngokwamacandelo.
1 Khuphela ii-wallpapers ze-Android
2 Uyenza njani ngokwakho imfono yakho yamaphephadonga e-Android
3 Ungayitshintsha njani iphepha lodonga kwi-Android
4 Enye indlela yokutshintsha iphepha lodonga kwi-Android
Khuphela ii-wallpapers ze-Android
Ungabeka phantse nawuphi na umfanekiso we lodonga kwi-android. Ingxaki kukuba xa sikhangela i-intanethi, kulula ukufumana ubukhulu obukhulu okanye ubukhulu obungahambi kakuhle njengoko besilindele. Ukuba awufuni kuchitha ixesha, ungasoloko ujonga igalari yethu yemifanekiso ngokundwendwela amakhonkco alandelayo:
Iibhotile 18: 9
Imvelaphi eyaziwayo neyaziwayo
Ikhompyuter kunye netekhnoloji yamaphephadonga
Iimidlalo zamaphephadonga omdlalo wevidiyo
Zonke iimali eziqokelelwe kule webhusayithi ziyipropathi yababhali bazo. Siyaqonda ukuba yonke imifanekiso iboniswe kwi androidsis.com Zikummandla woluntu kwaye ziyafumaneka kwi-Intanethi. Ukuba akunjalo, sithumele email kwaye iya kususwa kuvimba wethu ngokukhawuleza ukuhlonipha amalungelo obunini.
Uyenza njani ngokwakho imfono yakho yamaphephadonga e-Android
Nangona isixhobo sethu se-Android sinokuza nephepha lodonga esisasithandayo, ngokunokwenzeka sifuna ukusebenzisa imvelaphi ebhalwe igama lomntu okanye ehambelana ngakumbi nobuntu bethu. Into yokuqala endiyenzayo xa ndiqala isixhobo, nokuba yikhompyuter, ithebhulethi, iselfowuni okanye naluphi na uhlobo lwesixhobo se-elektroniki esinomsebenzisi, kukubeka imvelaphi endiyithandayo ngakumbi nakwiikhompyuter ndiyayitshintsha iyure nganye. Kodwa,Ungayitshintsha njani iphepha lodonga kwi-Android?
Ngenani leenguqulelo ezahlukeneyo ze-Android phaya, bekuya kuba yinto engenakwenzeka ukuyichaza ngqo inkqubo yazo zonke izixhobo, kodwa singachaza kwaye sibandakanye nezikrini zendlela yokwenza ngayo kwi-Nexus 5 eqhuba i-Android 6.0.1. Siza kuchaza iindlela ezimbalwa ukwenza njalo ukuqinisekisa ukuba nabani na unokutshintsha iphepha lodonga lwezixhobo zabo ze-Android, enye yazo ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo zokugubungela ezinye iintlobo zezixhobo
Ungayitshintsha njani iphepha lodonga kwi-Android
Inkqubo ilula kakhulu, kodwa siyazi ukuba into elula kwabanye inokuba nzima ngakumbi kwabanye, ke ke ndiya kwiinkcukacha amanyathelo ekufuneka elandelwe:
Sivula useto lwesixhobo.
Siya kwicandelo le- «Screen».
Ngaphakathi kwesikrini, singena «Iphepha lodonga». Kwezinye izixhobo, ukhetho lunokubonakala ngokulula njenge "Imvelaphi".
Kwicandelo elilandelayo sinokukhetha phakathi:
Khangela kwimemori khadi.
Indawo yokugcina iifoto.
Singena kwicandelo apho siya kufuna ukusebenzisa umfanekiso kwaye siyikhethe.
Ngaphambi kokuseta iphepha lodonga elitsha, sinokuhlela amaxabiso athile, njengokucoca umfanekiso, okanye ukuwuguqula. Siyayihlela njengoko sifuna.
Kwezinye iinguqulelo ze-Android, ezinje nge-4.4.2 Isamsung iTouchWiz, kwinyathelo 4 ukhetho lokukhetha ukuba sifuna ukuyibeka kwiscreen sasekhaya, kwiscreen sokutshixa okanye kuzo zombini ziya kuvela ngokuthe ngqo. Emva kwexesha siya kuba nakho ukubonisa ukuba siwuthathe phi umfanekiso kwigalari yemvelaphi yoopopayi, imifanekiso yamaphephadonga okanye igalari yethu. Eminye iyafana naleyo icacisiweyo.
Ukuba ukhuphele umfanekiso omkhulu kakhulu, nantsi sichaza Ungasitshintsha njani isisombululo sefoto ngendlela elula.
Enye indlela yokutshintsha iphepha lodonga kwi-Android
Kukho enye indlela eyonanto yokuqala endicinga ukuba kufuneka uzame nokuba ungaluphi uhlobo lwesixhobo se-Android onaso. Imalunga nokusebenzisa indlela emfutshane: ukusuka kwi-reel okanye nasiphi na isicelo (kubandakanya ifayile yokuhlola) egcina okanye enokufikelela kwimifanekiso. Ukutshintsha iphepha lodonga ngale ndlela kuya kufuneka senze oku kulandelayo:
Sihamba siye kumfanekiso esifuna ukuwuchaza njengephepha lodonga, elinokuthi lingene kwi-reel, kwikhamera, kwiifoto zikaGoogle okanye naphina apho sinayo.
Siyacinezela kwaye sibambe de sibone iindlela ezikhoyo.
Sikhetha «Misela njenge ...».
Sikhetha ukhetho olufunwayo phakathi kwezo zivelayo, ezinje:
Kwiskrini sasekhaya kuphela.
Kuphela kwiscreen sokutshixa.
Kwiskrini sasekhaya nakwisitshixo sokutshixa.
Njengakwindlela yangaphambili, sinokuhlela into efotweni, njengokuyinqanda, ukuyandisa, njl.
Okokugqibela, siyalwamkela utshintsho.
Kungenzeka ukuba unesixhobo esidala, ukucofa umfanekiso wesibini akubonisi naluphi na ukhetho. Ukuba kunjalo, kuya kufuneka ubeke elinye endaweni yalo ngomnye: chukumisa iqhosha lokukhetha yesixhobo sakho. Njengoko usazi, izixhobo ezininzi ze-Android zinamaqhosha amathathu: eyona iphambili okanye yokuqala iqhosha, ukubuyela umva kunye neyesithathu esiza kuyichukumisa ukubonisa iinketho ezikhoyo. Elo liqhosha ekufuneka ubambe kulo kwinyathelo lesi-3 lenkqubo edlulileyo.
Ufumana phi iimifanekiso zeselfowuni? Sitshele malunga nezixhobo zakho xa kuziwa ekukhupheleni amaphephadonga kunye nokubeka amaphephadonga amatsha e-Android, esinye sezona zixhobo zilula kwaye zikhawulezayo ukunika iselfowuni okanye ithebhulethi utshintsho lwenkangeleko.